Aragtiyaha Laga Aaminsan Yahay Musharraxiinta Xisbiyada Somaliland – HormoodNews
Aragtiyaha Laga Aaminsan Yahay Musharraxiinta Xisbiyada Somaliland
08/11/2017 1:16 am by Cabdiqaadir Carab Views: 53
Hargeysa (HMN) – Somaliland waxa 13-ka bisha November, 2017-ka, Haddii Alle yidhaahdo ka dhacaysa Doorashada Madaxtooyada, taasi oo ku tartamayaan Saddexda Xisbi Qaran ee kala ah WADDANI, UCID iyo Xisbul-xaakimka KULMIYE.
Guddiga Qaabilsan Doorashooyinka Qaranka Somaliland oo ka kooban 7 Xubnood, ayaa diyaariyey Tasiilaadka suurto-gelinaya Qabsoomidda Doorashada Madaxtooyada, waxayna horraantii Sannadkan ay Dalka ka qabteen Diwaangelinta cod-bixiyeyaasha, xilligana waxay wadaan qaybinta Kaadhadhka Cod-bixinta, iyadoo Labada Gobol u dambeeya Qaadashada Kaadhadhku ka bilaabmayso Sabtida Toddobaadka soo socda oo bisha 8-aad tahay 12.
Muddada Kaadh-qaadashadu ka socota Gobollada Dalka, waxa Guddiga Anshaxa Kaadh-qaadashadu Mabnuuceen in Xisbiyadu Ololeeyaan isla-markaana Fagaareyaasha ay Dadweynaha kaga codsadaan inay Codkooda siiyaan, taa beddelkeedana ay Dadweynaha ku dhiiri-gelinayaan inay si wanaagsan u qaataan Kaadhadhka Cod-bixinta.
Hasa-ahaatee, Xisbiyada Qaranku Dheg jalaq uma siinin Go’aanka Guddiga anshaxa Komiishanka, waxayna wadaan Ololeyaal, iyaga oo Xisbiyadu iskaga dab-qaadaya Gobollada Dalka, si ay u muujiyaan Taageerada ay ku leeyihiin Gobollada, Dadweynahana ka codsanaya inay taageeraan oo Codkoodana siiyaan Maalinta Doorashada la gaadho.
Xisbiyada Somaliland ayaa waxa Musharraxiin Madaxweyne ka kala ah Faysal Cali Waraabe oo Guddoomiye ka ah Xisbiga UCID, Muuse Biixi Cabdi oo Musharrax ka ah Xisbiga Muxaafidka ah ee KULMIYE oo sidoo kale uu Guddoomiye ka yahay iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) oo Musharrax Madaxweyne iyo Guddoomiye-ba ka ah Xisbiga Mucaaradka ah ee WADDANI.
Musharraxiinta Saddexda Xisbi oo marka la eego Dadka Somaliland wada dega ka soo wada jeeda Beel keliya, ayaa Ololeyaashooda waxay u badan yihiin Ballan-qaadyo ku saabsan waxay Mustaqbalka qaban doonaan, isagoo mid walba ka kale ku Dhaliila inaanu hoggaamin karin Somaliland haddii la doorto.
Musharraxa Madaxweynaha ee Xisbiga KULMIYE Muuse Biixi Cabdi, ayaa Musharraxiinta Xisbiyada kale iyo Dadka qaarkood ku doodaan in aanay jirin Sabab loo doortaa, maaddaama oo Xisbiga uu ka sharraxan yahay ee KULMIYE uu ka soo baxay Madaxweyne Axmed-Siilaanyo oo hadda Xilka haya, kaasi oo isaga iyo Xukuumaddiisaba lagu dhaliilo inay samayeen Musuqmaasuq baahsan, Musuqmaasuqaas ayaa Muuse Biixi laftiisa lagu dhaliilaa inuu qayb ka yahay, haddii uu ka hadli waayay, sida Dadka qaar qabaan.
Inkasta oo Dadka qaar qabaan Aragtidaa aanu kor ku sheegnay, waxa jira Dad badan oo aaminsan in Muuse Biixi Cabdi uu ku habboon yahay in loo doorto Madaxweyne. Dadkaasi oo ku doodaya in Somaliland marayso Marxalad adag oo loo baahan yahay Qof Hoggaamintiisu adag tahay oo Marxaladdan kala dabbaasha, kaasina noqon karo Musharraxa KULMIYE Muuse Biixi Cabdi.
Faysal Cali Waraabe oo Musharrax Madaxweyne ka ah Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID, ayaa la aaminsan yahay inuu yahay Musharrax caan ku ah Dal jacayl, wallow Dadka qaarkood leeyihiin kuma habboonayn inuu noqdo Musharraxa Madaxweynaha ee Xisbiga UCID, iyagoo taasi sabab uga dhigaya inuu Laba Jeer oo hore Musharrax Madaxweyne u noqday Xisbigaasi, wax guul ahna ka gaadhin.
Faysal oo mar walba ku foogan ilaalinta Sumcadda Somaliland ee Gudaha iyo Dibedda Dalka, ayaa Dad qaar ku dhaliilaan inuu Deg-deg badan yahay, lahaynna Siyaasad deggan oo la garan karo Jahada ay socoto.
Laakiin, Dad kale ayaa aaminsan in Somaliland xilligan u baahan tahay Madaxweyne Daacad ah oo la dagaalama Musuqmaasuqa naafeeyay Dalka, waxna ku qabta Dakhliga Dalka soo gela, maaddaama oo Somaliland tahay Qaran aan la Aqoonsan, wax kaalmo dibadeedna ahna helin, kaasina yahay Faysal Cali Waraabe.
Xisbiga WADDANI, waxa Musharrax Madaxweyne ka ah Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), oo 12-kii Sannadood ee u dambeeyay ahaa Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Somaliland, xilkaasi oo uu banneeyay bishan Gudaheeda.
Cabdiraxmaan-Cirro oo haysta Dhalashada Dalka Finland, ayaa la sheegaa inuu Shaqo Diblumaasiyadeed ka soo qabtay Dawladdii Milletariga ahayd ee Dalkii la isku odhan jiray Jamhuuriyadda Soomaaliya, shaqadaasi oo uu hayey illaa intii ay burburaysay Dawladdaasi.
Dadka taageera ayaa sheega in Cirro yahay diblumaasi Qunyar socod ah oo isku wadi kara Beelaha Somaliland, haddii la doorto.
Dadkaasi waxa kale oo ay ku doodaan in khibraddiisa Diblumaasiyadeed Cirro u sahashay inuu Xidhiidh fiican la yeesho Beesha Caalamka, Sidaasi darteed haddii la doorto ay Suurto-gal tahay in Beesha Caalamku qadiyadda Somaliland fahamto oo Aqoonsato.
Laakiin, waxa jira Dad kale oo aaminsan in Musharraxa WADDANI uu yahay nin aanay Caddayn waxa uu aaminsan yahay, Go’aan-qaadashadiisuna liidato, sidaasi awgeed aanay jirin Sabab uu Madaxweyne uga noqdo Dal aan la aqoonsan oo ku dhex yaalla Gobol holcaya, cadow badan leh, Dadkiisuna aanay dimuqraadiyadda u bislaan oo ay Beelo u kala fadhiyaan.
Hormood Staff Writter